Izimila Zemithi Isixazululo se-HVAC
Izitshalo zemithi zithembele ekusebenzeni kwamakamelo ahlanzekile ukuqinisekisa ukuthi amazinga emikhiqizo abalulekile ayafinyelelwa. Izinhlelo ze-HVAC ezingxenyeni zokukhiqiza zezindawo zokwenziwa kwemithi zigadwe kakhulu yi-ejensi kahulumeni. Ukwehluleka ukuthobela noma iziphi izidingo zekhwalithi kungabeka umnikazi engozini yomthetho kanye neyebhizinisi. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi izinsiza ezithaka imithi zakhiwe ngaphansi kohlelo lokulawula ikhwalithi oluqinile noluchazwe kahle. I-Airwoods idizayina, yakha futhi igcine uhlelo oluqinile lwe-HVAC kanye negumbi lokuhlanza elihlangabezana nokufunwa okuqinile okuhambisana nezinsiza zemithi.
Izidingo ze-HVAC zeMithi
Izidingo zekhwalithi yomoya yasendlini ezindaweni zokwenziwa kwemithi, kufaka phakathi ukulawulwa komswakama kanye nokuhlunga kungenye yezinto ezinzima kakhulu kunoma yiluphi uhlelo lokwakha. Enye yenqubo ebucayi kakhulu ukungena komoya okufanelekile. Ngenxa yokuthi inhloso eyinhloko ukulawula ukungcola endaweni yokukhiqiza nokucwaninga, uthuli negciwane kuyizinsongo ezihlala zikhona kulezi zakhiwo, ezidinga uhlelo olwenziwe ngokucophelela lokuhlunga nomoya onamathela emazingeni aqinile wekhwalithi yomoya (IAQ) futhi kusiza ukunciphisa ukuvezwa kwezifo ezisemoyeni nokungcola.
Ngokwengeziwe, ngoba izindawo zokwenziwa kwemithi zidinga ukulawulwa kwesimo sezulu okungaguquguquki, okusebenzayo, kubalulekile ukuthi uhlelo lwe-HVAC luqine ngokwanele ukuthi lusebenze ngokuqhubekayo, kepha lusebenze ngokwanele ukugcina izindleko zamandla ziphansi ngangokunokwenzeka. Okokugcina, ngoba izindawo ezahlukahlukene zezikhungo zizoba nezidingo zazo ezihlukile zokungenisa umoya kanye nezinga lokushisa, uhlelo lwe-HVAC kumele lwenzelwe ukujwayela izidingo ezahlukahlukene zokulawulwa kwesimo sezulu ezingxenyeni ezahlukahlukene zesikhungo.
Ifektri Eqinile Yezemithi
Ifektri Yemithi Yoketshezi
Ifektri yePowder Pharmaceutical
Ukugqoka Ne-Patch Pharmaceutical Factory
Umkhiqizi Wedivayisi Yezokwelapha
Izixazululo zethu ze-HVAC, izinhlelo ezihlanganisiwe zokufaka uphahla, nokwenza ngendlela oyifisayo Igumbi elihlanzekile ukuhlangabezana nezidingo eziyinkimbinkimbi zomkhakha wokukhiqiza imithi, odinga ukulawula okuqinile nezinhlayiya.
Senza ukuhlolwa okuphelele kwezidingo zamakhasimende ethu futhi sihlinzeka ngemiklamo ebanzi ebheka inqubo yokukhiqiza, imishini, ukuhlanzwa kwesimo somoya, ukuhlinzekwa kwamanzi kanye namapayipi, ukucaciswa kukahulumeni nemithethonqubo.
Ekwenziweni kwemithi, ukukhiqiza nokusebenza kahle kuyizikhiye zempumelelo. Ukuhlelwa komklamo kuzoba okunengqondo futhi okuhambisanayo ngokuya ngezidingo zenqubo yokukhiqiza, evumelana nomsebenzi wokukhiqiza futhi eqinisekisa ukuphathwa ngempumelelo kwenqubo yokukhiqiza.
Ohlelweni lokuhlanzwa komoya, kunemiqondo emibili ebalulekile. Enye ingukulawulwa kwengcindezi okuhle ukuvimbela umthelela womoya wangaphandle emvelweni; Futhi ukulawula ingcindezi okungekuhle ukuvimbela ukusabalala kokungcola kwezinhlayiyana enqubeni yokukhiqiza. Noma ngabe udinga ingcindezi enhle yomoya noma igumbi lokuhlanza umfutho womoya omubi, umkhiqizi nomsabalalisi onolwazi onolwazi, njenge-Airwoods, angaqinisekisa ukwakhiwa, ukuthuthukiswa, nokulethwa kwesisombululo esihlangabezana nezidingo zakho. Kwa-Airwoods, ochwepheshe bethu banolwazi oluphelele lokusebenza ngayo yonke inqubo yokwakhiwa kwendlu yokuhlanza nenqubo yokwakha, kusukela ezintweni zokwakha izindlu zangasese nemikhuba ehamba phambili kuye kwimishini ye-HVAC edingekayo ezinhlotsheni ezahlukahlukene zezicelo.
Ifektri Yezemithi yaseBolivia
Iphrojekthi Yezindlu Zokuhlanza ZaseCambodia
Iphrojekthi yaseBolivia Yezindlu Zokuhlanza